The Road to Re-opening Hotel Doors - a Guide | Hospitality Industry News
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Ny làlana mankamin'ny fanokafana indray ny varavarana hotely - torolàlana
Ny làlana mankamin'ny fanokafana indray ny varavarana hotely - torolàlana
Andrew J Wood dia mandinika ny paikady mety hitranga amin'ny hotely
Alao antoka fa voasaronao ny zava-drehetra ka vonona ianao hanokatra trano fandraisam-bahiny mahomby
Ilaina tokoa ny manasatra ny tetibola hiasa mafy ho azy ireo
Avereno jerena ireo vahaolana momba ny teknolojian'ny trano fandraisam-bahiny mba hamoronana tontolo mailaka izay mametraka farafara ambony kokoa amin'ny hatsaran'ny teknolojia mankany amin'ny ho avy
Rehefa mipoitra eo amin'ny faravodilanitra ny sombin-jiro ary hahatonga anao sy ny trano fandraisam-bahinao amin'ny endrika mety indrindra rehefa manokatra indray ianao dia misy anton-javatra maro tokony hodinihina satria ny tsena erak'izao tontolo izao dia manamaivana tsimoramora ny fivezivezena. Alao antoka fa voasaronao ny zava-drehetra ka vonona ianao ny hanokatra indray.
Rehefa manomboka miomana amin'ny tetibola amin'ny taona ho avy ianao, dia tsy maintsy ataon'ny hotely miasa mafy kokoa ny teti-bolan'izy ireo. Miaraka amin'ireo fanamby natolotry ny Covid-19, izao dia tsy ny fotoana intsony handinihana ireo vahaolana momba ny teknolojian'ny hotely hamoronana tontolo mailaka izay mametraka farafara ambony kokoa amin'ny hatsaran'ny teknolojia mankany amin'ny ho avy.
Izaho dia nisafidy serizy ary namintina ny torohevitra tsara indrindra izay mety hanaporofoana ny lisitra fanamarinana mahasoa ao amin'ny tontolontsika vaovao. Aorian'ireo torohevitra tsy dia misy fahalalana firy ho an'ireo mpikirakira trano fandraisam-bahiny sy mpandray anjara amin'ny fizahan-tany, manantena aho fa ny 40+ taona naha-mpitahiry hotely ahy dia afaka manavaka ny sasany amin'ny varimbazaha amin'ny katsaka.
• Mba hanamaivanana ny fitaintainan'ny mpiasa sy ny mpitsidika dia ampirisihina ny fiofanana fanampiny ho an'ny mpiasa miatrika aloha. Amin'ny fisokafan'ny trano fandraisam-bahiny miaraka, ny fifantohana dia tokony hampiavaka ny mampiavaka ny marika hotely sy ny tolotra, hahafahan'ny fahasamihafana misy eo amin'ny trano fandraisam-bahiny mipoitra avy amin'ny fanidiana. Rehefa miverina amin'ny fenitra iasana ny orinasa, aorian'ny fanidiana - ampahany na tsia - ny mpiara-miombon'antoka mpitety faritany sy ny mpanjifany dia mila mahazo antoka fa miditra amina asa azo antoka sy azo antoka izy ireo izay nitazona ny fenitra ary manome lanja ara-bola amin'ny fifaninanana.
• Ataovy izay hahazoana antoka fa ny mpandray anjara rehetra - toa ny banky, ny mpandraharaha ary ny mpamatsy - dia mahatsapa ny momba ny drafitra fanokafana indray.
• Ny tontolo azo antoka miaraka amin'ny SOP (Fomba fiasa mahazatra) sy ny fitandremana dia eo an-tampon'ny lisitry ny mpiara-miasa aminao. Ireo masoivoho dia mety te-hijery ny fanananao alohan'ny hametrahana ny mpanjifany ao amin'ny efitranonao. Eny, ho hitan'izy ireo ny fahadiovan'ny tanana, ny sarontava, ny fihatahana amin'ny fiaraha-monina ary ny fifehezana eo amin'ny pisinina. Izy ireo koa dia mila mahafantatra fa ny mpiasan'ny laharam-pahamehanao dia voaofana amin'ny fomba fidiovana azo antoka.